ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - ဖြန့်ဝေ
အခမဲ့သို့မဟုတ်ကမကထပြုဖြန့်ဖြူး, content နှင့်ဆက်နွယ်သောပူဇော်သက္ကာများကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဖြန့်ဖြူးကိုပစ်မှတ်ထား: အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ကြော်ငြာခြင်းသုံးအခြေခံမူများကမောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။
ငါဖောက်သည်များသူဌေးနှင့်သိကောင်းစရာများသမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု content တွေကိုဖတ်ရှုဖို့ဘာမှမပေးဆောင်ရန်မလိုပါကြောင်းဆိုလိုတာကစားသုံးမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး၏အချက်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောရီယိုထုတ်ကုန်များ, LOVE, နှင့်ဖြန့်ဖြူးရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်ရန်မလိုပါအမျိုးမျိုးသောရှိပါတယ် ဖောက်သည်များဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့ product အဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဝဘ်ဆိုဒ်။
ငါအချစ်ရီယိုဖြန့်ဖြူးမဟာဗျူဟာကိုနှစ်ဦးစလုံးလူမျိုးနှင့်တကမ္ဘာလုံး ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပုံရိပ်ကိုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အစီအစဉ်များနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများပါဝင်သည်။ ၏အစိတ်အပိုင်း
ထို Portal ကို 50 ကျော်ဘာသာစကားများကိုပေးအပ်သည်အခမဲ့နှင့်မူထူးခြားတဲ့ content တွေကိုတဆင့်နိုင်ငံတကာအင်တာနက်မြင်နိုင်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာပေးရရှိနေစဉ်, ဒေသခံ Carioca ဟာယပူဇော်သက္ကာစားသုံးသူထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကနေတဆင့်နက်ရ​​ှိုင်းသောဘရာဇီးကအတွင်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အတူတူ Carioca ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းနှင့်စက္ကူစာပမြေားကနေတဆင့်ခရီးသွားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးရေး, တစျအပေါ်နောက်ထပ်ချဲ့ထွင် ဘက်စုံသုံး-ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကိုတည်ဆောက်စေ။
အားလုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးကစုစည်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အမြင်အာရုံဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူတွဲအယ်ဒီတာအဖွဲ့ content တွေကိုအံဝင်ခွင်ကျ, Carioca သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအတွင်းကသူတို့ကိုလိုက်သည်စဉ်ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုရှင်းပြခြင်းနှင့် အားလုံးမြှင့်တင်ရန် ရန်အသုံးပြုသည်။
အလှကုန်အနေဖြင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများမှ, ဓာတ်ပုံစာအုပ်များမှ အစားအစာ ထံမှ spanning, ငါရီယိုအစဉ်အဆက်ကပိုဝေး-ရောက်ရှိဖို့, ဆန်းသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းတွေထဲမှာ Cidade Maravilhosa ၏ရတနာအချို့ကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထား sဖို့သန္နိဋ္ဌာန် LOVE ။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့နှင့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဲကျွန်မရီယိုစာဖတ်သူများ Portal ကို၏အကြောင်းအရာများ, စတိုင်နဲ့ဒဿနကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လူသိများကြသည်ဘယ်မှာမြင့်မားမြင်သာတည်နေရာ, မှတစ်ဆင့်ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ် LOVE ။ ရီယို၏မြို့အတွင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာခြင်း၏အဓိကဧရိယာနေထိုင်ရန်အဆောင်များ, ဟိုတယ်နှင့်ကုန်တိုက်ကြီးတွေအပေါ်အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်နှင့်တကွ, Zona Sul နှင့် Barra ကို da Tijuca ၌ရှိကြ၏။
အဆိုပါ ILOVERIO.comဝဘ်ဆိုဒ်ငါစူးစမ်းခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဆောင်းပါးတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံ၏အနံအဖြစ်အသက်ရှု-ယူပြီးဓာတ်ပုံတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့်တမြို့လုံးကို re-ကစိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့သူဌေးများနှင့်ရှေ့ဆောင်ဝဘ် Portal ကိုအပါအဝင်, ရီယိုအစုစု LOVE ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တမူထူးခြားတဲ့ ကို အမြင်အာရုံဝိသေသလက္ခဏာ ကို
အကွောငျး I LOVE RIO
တစ်တင်ဆက်မှု ရီယိုဒီဂျနေးရိုး တစ်ဦး, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းနှင့်အတူ တမြို့လုံးလှပစေပါသမျှသောရှုထောင့်၏အနက်ကို ယနေ့ကြောင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာ။
I LOVE RIO အချိန်သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းသည်, ဧည့်သည်ကတိုက်ရိုက်အများစုအားဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားမရနိုငျကွောငျးရီယို၏များစွာသောထောင့်တစ်လျှောက်ကို virtual အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Portal ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် I LOVE RIO ထုတ်ကုန်များ၏အစုစု, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှုအသီးအသီးကို အသုံးပြု. ရီယိုဒီဂျနေးရိုး.
ကမ်းလှမ်းမှု, သတင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပိုပြီးအဘို့ငါတို့စာပို့စာရင်းတွင် Subscribe!
မူပိုင်ခွင့် POSTO9.com, LLC. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။